Huvandhumaa Ukuhlala ekhaya
I-Huvandhumaa Indawo yokuhlala yaseKhaya ifumaneka kwisiqithi sase-Dhiggaru (i-Meemu Atoll) eyi-2 iiyure ukusuka kwi-Malé nge-speed boat.Apho ubuhle bendalo be-Maldives budibana nendawo apho abantu bamkela kwaye banelisekile ngobomi.
Amaxabiso- $41 ubusuku ngabunye, igumbi ngalinye
I-Huvandhumaa Ikhaya lokuhlala ayisiyondawo yokuphumla nje kuphela kodwa ufumane imvakalelo yokuba yinxalenye yosapho lwaseMaldivian xa ukude nekhaya. kwaye ukonwabela ikomityi yekofu egqibeleleyo ngelixa ujonge ukuphuma kweLanga kwaye lijonge elundini .
Isiqithi saseDhiggaru sahlukile kwezinye iziqithi obuya kunikela ubungqina kuzo kwenye indawo. Ngapha abantu abakujongi ngendlela eyahlukileyo kodwa bakuphatha njengenxalenye yosapho lwabo. Naphi na apho ujikeleze isiqithi abahlali bendawo bayakumema ukuba ube yinxalenye yabo kwaye thina eHuvandhumaa Ekhaya Hlala sikholelwa ukuba le yeyona nxalenye yenkcubeko yaseMaldivian.
Sifumaneka 24 -Iiyure ukulungiselela iindwendwe. Sikwabonelela ngoTshintshiselwano lweMali ye-USD kunye ne-EURO.